Apho ungabona khona imiyalezo ye-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Apho ungayibona khona imiyalezo ye-Instagram
Julayi 10, 2019 0 IiCententarios 948
Umsebenzi wokuthumela imiyalezo akuyona into entsha ngaphakathi kweapps. Amaqonga afana ne-Facebook adibanisa imiyalezo kangangexesha elithile kwaye ezi zinto ziphakanyisiwe njengezithandwayo zabasebenzisi abaninzi. I-Instagram kwelinye icala igcine uyilo lwayo loqobo kude kube lixesha elidlulileyo, xa bathe ekugqibeleni bayihlanganisa imiyalezo kwiqonga labo. I-Facebook yaba ngumnini we-instagram ekuqaleni konyaka 2012. Ngaphandle kwale instagram yaqhubeka nokusebenza njengoko isiza. Kodwa iFacebook ikwadibanisa inkonzo yemiyalezo ebizwa ngokuba yi-instagram ngqo kwiqonga le-instagram. Njengoko ebewenze kwilixa elidlulileyo kunye noMthunywa wakhe.
Ngaphambi kokudibanisa imiyalezo kwiqonga lakho. I-Instagram ivumele abasebenzisi ukuba banxibelelane. Oku ngokusebenzisa izimvo kwaye ndiyayithanda. Ngokungafaniyo ne-Facebook, inkonzo yokuthumela imiyalezo nge-intanethi ayiphuculwanga. Nangona iluncedo kakhulu kubasebenzisi bakudala nabatsha ababuza apho ungayibona khona imiyalezo ye-Instagram.
Uyibona njani imiyalezo ye-instagram
Sele kulilixa ukusukela ngoko i-instagram yayila eyayo imiyalezo. Ukusuka apho umsebenzisi akwazi khona apho ungayibona khona imiyalezo ye-Instagram. Xa i-instagram iqala umsebenzi wayo kwi-2010, ivumela abasebenzisi bayo ukuba banxibelelane ngamagqabantshintshi. Nangona kwakusebenza, yayingeyiyo imiyalezo yabucala kwaye nabani na ohamba ngezithuba wayenokubabona. Ngokudityaniswa kwenkonzo yemiyalezo ethe ngqo ebizwa ngokuba yi-instagram ngqo. I-Instagram yandise iqonga layo kwihlabathi elitsha lemiyalezo yangasese.
Nangona abasebenzisi ngoku benokwazi ukunxibelelana ngemiyalezo yabucala. Inyani yile yokuba abayi kufumana eqongeni inkonzo yemiyalezo efana neWhatsApp okanye uFacebook. I-Instagram ngqo ayinazo iifowuni okanye iifowuni zevidiyo. Kwaye ngaphandle kokuthatha ixesha elininzi ngaphakathi kwi-instagram kuyinto encinci emva kwezinye iinkonzo zeposi. Ukujonga imiyalezo ye-instagram kwifowuni yakho kufuneka wenze oku kulandelayo:
Qiniseka ukuba unonxibelelwano lwe-Intanethi.
Ngenisa usetyenziso lwe-instagram kwaye emva koko ufake idatha yakho yomsebenzisi.
Kanye ngaphakathi kwi-Instagram. Jonga isikrini sasekhaya esibonakalayo. Esi sikrini sinemenyu ephezulu kunye nenye i-infernos. Gxila kweliphezulu. Kule nto uza kubona umfanekiso obhalwe khamera kwikona ephezulu ngasekhohlo. Oku kulandelwa ngegama le-instagram. Emva koko uza kubona uphawu lwe-IGTV. Okokugqibela uza kubona umfanekiso obunjengeplanethi yephepha. Le yi-logo ngqo ye-instagram, apha ungazi Apho ukubona imiyalezo ye-instagram.
Cinezela i icon yendiza, i-instagram ngqo iya kuvela kwangoko. Apho bagcina khona yonke imiyalezo. Uza kubona kwiscreen igama lakho lomsebenzisi, ikhamera yevidiyo kwaye ekugqibeleni umfanekiso unepensile kwikona ephezulu ngasekunene. Uyakufumana injini yokukhangela kwaye ngezantsi koluhlu nayo yonke imiyalezo oyithumeleyo. Ngasentla kwezi zizicelo zomyalezo.
Ungawuthumela njani umyalezo kwi-imeyile
Ukuthumela imiyalezo ngaphakathi kwe-instagram kulula kakhulu, njengoko kunjalo kwezinye izinto kwiqonga. Into yokuqala ekufuneka uyazi ukuthumela umyalezo Apho ukubona imiyalezo ye-instagram. Nje ukuba uyazi oku, inkqubo yokuthumela umyalezo ilula. Into yokuqala ekufuneka uyenzile yile:
Cofa kwi-icon yeplanethi yephepha ebonisa i-instagram ngqo.
Xa sele ukulo msebenzi uyakuqonda ukuba kukho imenyu ephezulu.
Kule menyu uya kufumana igama lakho lomsebenzisi, ikhamera yevidiyo kunye ekugqibeleni kunye nepensile icon. Kuya kufuneka ucinezele.
Xa ucinezela i icon kunye nepensile. Isikrini esinye siya kuvulwa ngokukhawuleza.
Esi sikrini ngumyalezo omtsha, onenjini yokukhangela ukufumana umntu omfunayo. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwabantu obalandelayo.
Umsebenzisi ngamnye kolu luhlu unesangqa esimpunga. Ngaphakathi kwi-instagram ngqo ungathumela imiyalezo kubantu abangaphezu koyedwa ngexesha. Ubuninzi be-15 yabantu ukuba ngqo.
Ukukhetha umsebenzisi ofuna ukuthumela umyalezo kuye kufuneka ucinezele. Khetha libe linye okanye libe liqela. Ngalo lonke ixesha ucinezela umsebenzisi isangqa ecaleni kwakhe ujika ube luhlaza.
Kwikona ephezulu ngasekunene uya kufumana ukhetho lokuncokola. Xa ukhethe ukuba uthethe nabani, cofa olo khetho.
Xa ukhetho lokuncokola lucinezelwe, kuvela isikrini esitsha. Ngeli xesha ubhale umyalezo. Kukho nokukhetha: Thumela ifoto, uthathe ifoto kwaye uyithumele, wenze okanye uthumele ividiyo esuka kwigalari
Inkonzo yokuthumela imiyalezo ngqo kwi-intanethi ithini?
Inkonzo yemiyalezo engqalileyo ye-instagram ineempawu ezithile ezahlulahlula kwezinye iinkonzo zemiyalezo ngaphakathi kwamanye amaqonga. Zombini i-instagram kunye ne-whatsapp zingobukumkani be-Facebook, iqonga eliphambili lokugqibela lineenkonzo ezithandwayo zemiyalezo phakathi kwabasebenzisi bayo. Xa i-Facebook yenza ukuthengwa kwe-Instagram yayiyinto yexesha lokudityaniswa kwe imisebenzi emitsha, enye yazo yayiyinkonzo yakhe yokuhambisa iincwadi. Nangona inkonzo yomyalezo we-instagram yahluke kakhulu kwezinye iinkonzo zobukumkani obufanayo be-Facebook.
Omnye wemisebenzi eyahlula kakhulu i-instagram uhlala kunye nezinye iinkonzo ukuthumela iimpapasho ezivela kwabanye abasebenzisi. Kodwa, ukongeza koku kukho imisebenzi eyahlukeneyo onokuyisebenzisa ngaphakathi kwemiyalezo ye-instagram, yile:
Thumela izimvo malunga nembali kumsebenzisi oyithumele. Ngokungafaniyo nezithuba ze-instagram eziqhelekileyo, amabali awanasikhala senkcazo. Nangona zinokuchazwa ngenkonzo yekhuriya.
Ufumana izicelo qho xa umntu efuna ukuthumela umyalezo.
Ungathumela nezakho iiposti kwabanye abasebenzisi.
Ungawathumela awakho amabali kunye nabanye abasebenzisi komnye umntu ngokuphila.
Thumela ibali ngokuthe ngqo
Ngoku i-Instagram ibandakanywe kwimisebenzi yenkonzo yayo yemiyalezo amandla okuthumela iimbali. Into enokwenziwa nayo lupapasho. Kodwa yenziwa njani? Inyani yile yokuba yinkqubo elula kakhulu, apho ungadingeki nokuba wazi Apho ukubona imiyalezo ye-instagram. Zintathu iindlela zokuthumela ibali elivela ngqo kwi-instagram, ezi zitshintshana ngokuxhomekeka ekubeni ibali likabani. Ukuthumela ibali elivela kwi-instagram live kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ukuthumela ibali lakho
Xa kufikwa ekuthumeleni ibali lakho, zimbini iindlela. Eyokuqala isebenza ukuba ibali alikapapashwa ngaphambili okanye ukuba alisafumaneki. Okwesibini kukuba ibali lisekhona. Kwimeko yokuqala oku kulandelayo kwenziwa:
yiya kumabali e-Instagram.
Thatha okanye ukhethe ifoto okanye ividiyo.
Nje ukuba lelo nyathelo lenziwe, isikrini samabali e-Instagram sinothotho lokuhlela okanye lokushicilela. Iya kujonga kwakhona njengemenyu esezantsi enezinketho ezintathu.
Inketho yokuqala yokupapasha ibali, okwesibini ukuba ubonakale kuphela kubahlobo bakho abahamba phambili, kwaye okokugqibela ukuyithumela komnye umsebenzisi.
Ukuthumela ibali kufuneka ucinezele ukhetho lokugqibela. Uya kubona ngokukhawuleza uluhlu lwabantu obalandelayo.
Cinezela ofuna ukuthumela kuye kwaye uyenze.
Ukwenza oku akuyi kuthumela ibali lakho kuphela kodwa kuya kukusa kwiscreen apho ungabona imiyalezo ye-instagram, ezo uzithumele ngaphambili.
Ukufaka ibali lakho esele lishicilelwe yenza oku kulandelayo:
Ngena ibali olishicilele.
Inketho yokuqaqambisa kunye namanqaku amathathu aya kuvela kwikona esezantsi ngasekunene.
Cinezela kuwo onke amanqaku amathathu.
Nje ukuba kwenziwe, kubonakale iindlela ezininzi zokukhetha, kubandakanya ukuthumela ibali.
Ukucofa kuyo kuya kudwelisa abantu ongabathumela kubo kunye nokhangelo.
Khetha umntu lowo kwaye ucinezele ukuthumela. Njengakwifom yangaphambili, iya kuvela apho ungayibona khona imiyalezo ye-Instagram.
Ukuthumela ibali lomnye umsebenzisi
Kwimeko apho ufuna ukuthumela ibali lomnye umsebenzisi, kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ngenisa ibali ofuna ukulithumela. Ungayenza kwasekuqaleni kwe-instagram okanye ngokungena kwiprofayile yomsebenzisi.
Nje ukuba ube nebali ofuna ukulithumela, kufuneka ukwiimenyu ezisezantsi zebali. Apho unokufumana khona i-icon yekhamera, ukhetho lokuphawula ngokuthe ngqo kwifoto. Ekugqibeleni i-icon kwi-intanethi.
Cinezela i icon, uluhlu luya kuvela ngokukhawuleza nabantu obalandelayo. Abantu onxibelelana nabo kakhulu bavela njengokhetho lokuqala. I-injini yokukhangela iyavela, cofa umsebenzisi kuluhlu okanye ukhangele kuyo.
Xa ukhetha umsebenzisi cinezela ukuthumela.
Ngokungafaniyo xa uthumela ibali elilelakho, xa kusenziwa okufanayo nangomnye umsebenzisi, i-instagram ayikuthathe uyise apho ikhoyo imiyalezo. Kwaye ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba umyalezo uthunyelwe kufuneka ungene kwi-instagram ngqo.
1 Uyibona njani imiyalezo ye-instagram
2 Ungawuthumela njani umyalezo kwi-imeyile
3 Inkonzo yokuthumela imiyalezo ngqo kwi-intanethi ithini?
4 Thumela ibali ngokuthe ngqo
4.1 Ukuthumela ibali lakho
4.2 Ukuthumela ibali lomnye umsebenzisi
Yintoni igama lomsebenzisi kwi-Instagram
Uyothenga phi abalandeli be-instagram